Semalt: भुक्तानी धोखा भनेको के हो र यसलाई कसरी जोगाउने?
भुक्तानी धोखाधडी कुनै साइबर आपराधिक द्वारा कार्यान्वयन अवैध वा गलत लेनदेन को रूप मा दर्शाउँछ। स्क्यामरले व्यक्तिगत डेटा, कोष र पीडितबाट ब्याजको अन्य प्यारामिटरहरू प्राप्त गर्दछ।
ओलिभर किंग, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, बहुमूल्य अवधारणाहरू साझा गर्दछ जुन तपाईंलाई अनलाइन आक्रमणहरू सामना गर्न मद्दत गर्दछ।
तल भुक्तानी ठगी कार्यान्वयन हुने माध्यमहरू छन्:
चोरी वा हराएको व्यापार।
अनधिकृत वा ठगी लेनदेन।
चेक बाउन्स वा फिर्ती चेक, फिर्तीको लागि जाली अनुरोधहरू।
ई-वाणिज्य संगठनहरू ग्राहकहरूबाट भुक्तानी अनुरोध गर्न इलेक्ट्रोनिक लेनदेनमा निर्भर छन्। त्यस्तै, इलेक्ट्रोनिक लेनदेनको संख्या बढेको छ कि जालसाजी गतिविधिहरूको स्केलि। बढाउन।
भुक्तान ठगी को विभिन्न प्रकार समावेश:
कुनै पनि अनलाइन प्लेटफर्म जसलाई व्यक्तिगत डेटा चाहिन्छ जस्तै बैंक खाता वा क्रेडिट कार्ड यस आक्रमणको जोखिममा छ। स्रोत कानुनी हो, उदाहरणका लागि, एक बैंक संग एक पति या पत्नी, प्लेटफर्म भरोसायोग्य छ। तर, यदि स्रोत राम्रोसँग थाहा छैन भने, यसले अवैध रूपमा डाटा प्राप्त गर्न को हस्तक्षेप चित्रण गर्न सक्छ।
यो एक धोखाधडीको सामान्य प्रकार हो जुन डिजिटल क्षेत्रको दायरा भन्दा पर जान्छ। यो तब हुन्छ जब एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको प्रतिरूपण गर्दछ र केही अपराधहरू कार्यान्वयन गर्न उसको / उनको डाटा प्रयोग गर्दछ। पहिचान अपराध प्राय: सार्वजनिक Wi-Fi को उपयोग गरेर हाईज्याक लग इन प्रमाण पत्रको च्यानलको रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ।
यो तब हुन्छ जब एक ह्याकरले तपाइँको e-वाणिज्य साइटको एक भाग हाईज्याक गर्दछ र वेब प्रयोगकर्ताहरूलाई फरक प्लेटफर्ममा निर्देशित गर्दछ। प्रायः केसहरूमा अनावश्यक वेबसाइटमा खराब सामग्रीहरू द्वारा हावी छ जुन स्क्यामरहरू नेटवर्क सुरक्षा प्रणालीमा उनीहरूको मार्ग पत्ता लगाउन प्रयोग गर्दछ।
तार स्थानान्तरण र उन्नत शुल्क घोटालाहरू:
ह्याकरहरूले ई-वाणिज्य मालिकहरू र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्छन् क्रेडिट कार्ड वा नगद वितरणको अघि पैसाको लागि अनुरोध गरेर पछि।
व्यापारी परिचय धोखाधडी:
यस किसिमको धोखाधडी तब हुन्छ जब हैकर्स को लागी एक कानूनी संगठन को ठाउँमा एक व्यापारी खाता खोल्छ र चोरी क्रेडिट कार्ड बाट एक फिर्ती बनाउँछ। कार्डधारकहरूले नक्कली भुक्तानी महसुस गर्नु अघि स्क्यामरले खाताहरू बन्द गर्दछ।
कसरी ठगी हुन्छ?
जालसाजीहरूले अवैध रूपमा अनलाइन जानकारी प्राप्त गर्ने कार्यमा काम गरेका छन्। धेरै जसो केसहरूमा, ह्याकर्सहरूले संवेदनशील डाटाको लागि अनुरोध गर्ने वास्तविक प्रतिनिधि र फोन क्रेडिट कार्ड धारक भएको बहाना गर्दछन्। पछि, तिनीहरू निम्न जानकारीहरू अन्तर्क्रियामा व्यक्तिगत जानकारी लिन को लागी प्रयोग गर्दछ।
ग्याजेटहरूमा मालवेयर टेक्स्ट गर्दै
नक्कली साइटहरूमा पुनः यातायात
साइबर चोरहरूले नेटवर्क सुरक्षा प्रणालीको पहुँच गर्नका लागि टोलीहरू पत्ता लगाउँदछन् प्याचहरू वा गल्चहरू पत्ता लगाएर जुन मितिमा छैन। यी खाली ठाउँहरूको उपस्थितिले ह्याकरहरूलाई फायरवालको उपस्थितिमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ।
कसरी ई-वाणिज्य संगठनहरू धोखाधडी कम गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंको ई-कमर्स स्टोरमा धोखाधडी भएको खतराहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउन गाह्रो छ। भुक्तान ठगी विरूद्ध तपाईंको व्यवसायको सुरक्षा गर्न तपाईं निम्न उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ:
एक प्रमाणित भुक्तानी प्रोसेसरको साथ हात मिलाउनुहोस्।
महत्वपूर्ण डाटामा पहुँच वरिपरि घुम्ने नीति डिजाइन गर्नुहोस्।
एन्टि भाइरस सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै लगातार सुरक्षा जाँच गर्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि ग्राहकको व्यक्तिगत खातामा लगईन गर्नुहोस् खरीद गर्नु अघि।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि लगइन डाटा र टोकनहरू नियमित आधारमा परिवर्तन गरिएका छन्।
भुक्तानी धोखाधडी तपाईं र तपाईंको ग्राहकलाई हानिकारक छ। जालसाजीपूर्वक तपाईंको ई-कमर्स साइटलाई धोखाधडीको बिरूद्ध सुरक्षा गरेर, तपाईं आफ्नो व्यवसायको विश्वसनीयता अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ।